वी Sheng नयाँ सामग्री टेक्नोलोजी कं, लिमिटेड
वी Sheng नयाँ सामग्री टेक्नोलोजी कं, लिमिटेड 2019 मा स्थापित भएको थियो, Hengshui, हेबै प्रान्त, नजिकैको बेइजि मा स्थित छ। हामी एक पेशेवर र विश्वसनीय निर्यातक हो।
हामी तपाइँलाई के प्रस्ताव गर्न सक्छौं?
हामी मुख्य रूप मा जादू रंग ज्वाला पाउडर निर्यात, हामी यो उत्पादन गर्न हाम्रो आफ्नै कारखाना छ। हामी एक पेशेवर निर्माता र जादू रंग आगो पाउडर को निर्यातक हो र हामी सँधै जादुई रंग आगो ब्यापार र आर एन्ड डी, उत्पादन र बिक्री को एकीकरण को आतिशबाजी व्यापार मा धेरै बर्ष को लागी संलग्न छन्।
जादुई रंग ज्वाला पाउडर के हो? धेरै मानिसहरु यो उत्पादन को लागी परिचित छैनन्।
यो एक नयाँ आइटम हो, यो सुरक्षित र पर्यावरण को अनुकूल छ। यो Bonfire पार्टी, Camfire पार्टी, इनडोर परिवार पार्टी र समुद्र तट पार्टी को लागी प्रयोग गरीन्छ। । यो कुनै पनी काठ को आगो मा रंग ज्वालाहरु लाई जोड्न को लागी प्रयोग गरीन्छ, उनीहरु हामीलाई एक राम्रो रंग आगो ल्याउन सक्छन्, तपाइँ एक फरक शानदार प्रदर्शन दिन सक्नुहुन्छ!
यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने? एकदम सजिलो ! तपाइँलाई प्याकेजहरू खोल्न आवश्यक छैन, केवल कुनै पनी काठ जलेको आगो मा नखोलेका प्याकेजहरु टास गर्नुहोस्, त्यो ठीक छ, तब तपाइँ एक सुन्दर रंग आगो देख्न सक्नुहुन्छ! यो तपाइँको पार्टी को लागी एक राम्रो छनौट हो।
जादुई रंग ज्वाला पाउडर बाहेक, हामी पनि चिनियाँ आतिशबाजी, उपभोक्ता आतिशबाजी, स्टेज चिसो आतिशबाजी, जन्मदिन केक आतिशबाजी, रोमन मोमबत्ती, आकार स्पार्कलर र फव्वारा मिसिन, रंगीन ह्यान्डहोल्ड धुवाँ बम निर्यात, हामी Liuyang, गृहनगर मा स्थित धेरै आतिशबाजी कारखानाहरु संग सहयोग गर्दै छन्। आतिशबाजी को।
हामी पनि अन्य चिनियाँ तातो बेच्ने वस्तुहरु निर्यात, जो तपाइँ चाहनुहुन्छ, बस मलाई भन्नुहोस्। तपाइँ के चाहानुहुन्छ प्राप्त गर्न सँगै काम गरौं।सबैभन्दा प्रतिस्पर्धी मूल्य र उच्च गुणस्तर! तपाइँको खुशी र तपाइँको सन्तुष्टि हाम्रो मूल्य हो!
हामी एक राम्रो गुणस्तर नियन्त्रण प्रणाली र निरीक्षण तपाइँको वितरण समय र उत्पादन को गुणवत्ता आश्वासन गर्न को लागी छ। हामी ब्रान्ड उत्पादनहरु, OEM र ODM सेवाहरु प्रदान गर्दछौं। हामी हाम्रो ग्राहकहरु लाई अधिक मूल्य दिन को लागी हाम्रो सबै भन्दा राम्रो काम गरीरहेका छौं। आशा छ हामी एक राम्रो दीर्घकालीन सहयोग गर्न सक्छौं!